Degmada Bariire oo laga saaray Alshabaab ee Gobolka Shabeellaha Hoose – Idil News
Degmada Bariire oo laga saaray Alshabaab ee Gobolka Shabeellaha Hoose
Ciidamo isugu jira Cadaan iyo kuwa dowladda Soomaaliya ayaa la wareegay deegaanka Bariire ee gobolka Shabeellaha Hoose, sida saraakiil ka tirsan ciidanka dowladda ay sheegeen.
Deegaanka Bariire, ayaa waxaa uu dhacaa duleedka Degmada Afgooye ee Gobolka Shabeellaha hoose, waxaana weerar qorsheysan ku qaaday ciidamo ka tirsan Dowladda Federalka Somaliya oo wehlinaya ciidamo kale oo Cadaan ah.
Sarkaal ka tirsan ciidamada Dowladda ayaa sheegay dagaal kooban, kadib ciidamada inay si buuxda ula wareegeen gacan ku haynta Degmada Bariire, kadib markii halkaasi ay isaga baxeen ciidankii Shabaab ee ku sugnaa.
Deegaanka Bariire ayaa waxaa bilihii lasoo dhaafay gacanta ku hayay xarakadda Al Shabaab.
Xaaladda deegaanka ayaa hadda degan waxaana ciidamada dowladda ay waddaan howlgallo ammaanka ay ku darsayaan.
Maamulka dowladda ee Gobolka Shabeellaha Hoose, ayaa bishii lasoo dhaafay waxaa ay sheegeen in ay bilaabayaan howlgallo ay ku doonayaan in ay kula wareegaan deegaannada Al Shabaab ay ka maamulaan Gobolka.